Scheme nke Iye draya maka Glass Screen Printing Machine - China Lanlin Printech
Hot zọ Consumable
Scheme nke Iye draya maka Glass Screen Printing Machine
The iko draya na-eji maka ihicha na obi jụrụ ndị iko mgbe na ihuenyo obibi akwụkwọ. Machine ekewet na ihicha akụkụ na obi jụrụ akụkụ na-ebutu akụkụ. Okpomọkụ ukpụhọde nso: ụlọ okpomọkụ -180 ° C
Adopt ọkọlọtọ ihe maka akụrụngwa ozu, na igwe anaghị agba nchara maka n'ime ngosiputa.
Adopt dị gia moto maka njem. The iko na-ebu site na Teflon ala. Na njem na-agba bụ mgbanwe steplessly.
There bụ elu àgwà plastic roba mgbanaka nke na mgbaze-eguzogide ma na elu okpomọkụ na-eguzogide atụmatụ.
Adopt ekpo ọkụ ikuku convective mgbasa usoro.
There anọ ngalaba nke draya:
Nkebi mbụ: Loading ngalaba, ji butuo iko mgbe na ihuenyo-ebi akwụkwọ na n'ụzọ iko n'ime ihicha ngalaba.
Nke abụọ ngalaba: Ihicha ngalaba. E nwere ihe anọ na-ekpo ọkụ ikuku ihicha ngalaba. Ịmụta na elu okpomọkụ moto egweri na-ekpo ọkụ ikuku si Iye oriọna. Jide n'aka na ezi kpo oku na iko. The okpomọkụ ga-gosiri na ngosipụta. All nkebi anọ okpomọkụ nwere ike na-achịkwa iche iche. E nwere iyuzucha oghere na abụọ n'akụkụ nke kpo oku ngalaba.
Nke atọ Nkebi: Jụrụ ngalaba. Ịmụta Motors ka n'okpuru onwe na abụọ nke iko na-aghọta na obi jụrụ ọrụ. The okpomọkụ nwere ike mma n'okpuru 700C. Inside obi jụrụ ngalaba, e nwere ikuku nyo usoro, na iyuzucha usoro, hụ itule n'etiti ikuku na ike gwụrụ ikuku.
Fourth Nkebi: ebutu ngalaba. Eji butuo iko mgbe obi jụrụ. Ngalaba a na elu / ala ogbe, na racks, e nwere ihe nile-ntụziaka wiil na akụkụ ala ka butuo iko. The ụkwụ mgba ọkụ na-eji aka ịchịkwa ogbe akpụ akpụ na ala.
Cylinders-ebulikwa mkpuchi nke draya. Ọ dị mfe n'ihi na mgbe ọrụ na mmezi.
Adopt elu àgwà seramiiki eriri mkpuchi osisi maka kpo oku mkpuchi. Dịkwuo kpo oku arụmọrụ.
Obosara nke draya ọwara
Ogologo nke ihicha ọwara
Ịgbazi nso nke okpomọkụ
Ụlọ okpomọkụ 180 ℃
Ike nke infrared radieshon tube
46,8 KW (1.3KW X 9pcsX 4 Nkebi)
54. KW (1.5KW X 9pcsX 4 Nkebi)
96.0KW (2.0KW X 12pcsX 4 Nkebi)
arụ ọrụ Elu
90.0KW (2.5KW X 9pcsX 4 Nkebi)
93.6KW (2.6KW X 9pcsX 4 Nkebi)
129.6KW (5.4KW X 6pcsX 4 Nkebi)
144KW (6KW X 6pcsX 4 Nkebi)
28,8 KW (0.8KW X 9pcsX 4 Nkebi)
43,2 KW (1.2KW X 9pcsX 4 Nkebi)
Previous: Automatic Glass Screen Printing Line
2 agba balloon Screen Printing Machine
4 Agba 4 Station T-uwe elu ihuenyo Obibi Machine
40x60 Okpomọkụ Press Nyefee Machine
500 - Okpomọkụ Nyefee Machine
8 En 1 Okpomọkụ Nyefee Machine
Air Press Okpomọkụ Nyefee Machine
Auto Okpomọkụ Press Machine
Automatic Okpomọkụ Nyefee Machine
fụrụ afụ Screen Printing Machine
Cap Okpomọkụ Nyefee Machine
China Okpomọkụ Nyefee Machine N'ihi Skateboard
Gburugburu Okpomọkụ Nyefee Machine
Cup Okpomọkụ Press Nyefee Machine
Cup Sublimation Nyefee Printing Magic Foto Ụlọ Nga Okpomọkụ Press Machine
Omenala T uwe elu ihuenyo Obibi
Digital Cap Okpomọkụ Nyefee Machine Price List
Digital Screen Printing Machines T uwe elu
E ji esiji ákwà Sublimation Okpomọkụ Press Machine
echekwa UV Screen Printing Price
Fabric Okpomọkụ Nyefee Printing Machine
Handbagheat Nyefee Machine
Okpomọkụ Press Machine N'ihi Sale
Okpomọkụ Nyefee Film Printing Machine
Okpomọkụ Nyefee Machine
Okpomọkụ Nyefee Machine N'ihi Skateboard
Okpomọkụ Nyefee Machine N'ihi Osisi Product Skateboard
Okpomọkụ Nyefee Machines
Okpomọkụ Nyefee Akwụkwọ Printing Machine
Okpomọkụ Nyefee Press Machine
Okpomọkụ Nyefee Printing Machine
High Quality Okpomọkụ Press Nyefee Machine
Large Format Okpomọkụ Nyefee Machine
Large Okpomọkụ Nyefee Machine
New Ọgbọ okpokoro akịrịkọ Okpomọkụ Press Machine
Plastic Okpomọkụ Foil Nyefee Machine
Pneumatic Okpomọkụ Press Machine
Printing Machine Skateboard
Ibi akwụkwọ Machine Iji Bipute Skateboard
Roll Okpomọkụ Nyefee Machine
Ala Style Okpomọkụ Sublimation Nyefee Machine
Ala Sublimation Okpomọkụ Nyefee Machine
Now Screen Printer
Screen ntupu Printing
Screen Printing Machine N'ihi Plywood
ọkara Auto Screen Printer Machines
Silico n ink dee Screen Printing
Obere Screen Printing Machinery
Abù Screen Printing Machines
Sublimacion 8 En 1 Okpomọkụ Nyefee Machine
Sublimation Okpomọkụ Nyefee Machine
T uwe elu Okpomọkụ Nyefee Machine
T uwe elu Okpomọkụ Nyefee Printing Machine
T uwe elu ihuenyo Obibi Equipment
T-uwe elu Okpomọkụ Nyefee Press Sublimation Machine
T-uwe elu Printing Machine
T-uwe elu ihuenyo Obibi Machine
Nyefee Printing Machine
UV draya Screen Printing
UV Dugara n'ịgwọ N'ihi UV Screen Print
N'ogbe Okpomọkụ Press Nyefee Machine
Large Format Industrial Glass mpempe akwụkwọ Flatbed Scr ...